Resume Builder App, CV maker အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（9.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Resume Builder App, CV maker
အသိဉာဏ်ရှိသော CV Resber Ruilder အက်ပ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းယောဘလျှောက်လွှာအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖန်တီးရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ Resume Myanmar 50 ကျော်ရရှိနိုင်သည့်အရာ 50 ကျော်ရရှိနိုင်သည့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် CV template ကိုအရောင် 15 ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အော့ဖ်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းမှာကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဒီဇိုင်း 500 ရှိတယ်။
ခေတ်သစ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖန်တီးပြီးဤ CV Maker အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကျွမ်းကျင်သူ၏အကြံပေးချက်များသည် 2022 လမ်းကြောင်းအတွက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုမည်သို့ရေးရမည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များသည် 2022 ခုနှစ်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိရန်အထောက်အကူပြုမည်။ Professional Resume Templates & 42 ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံစံ 42 ခု။
2 ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံနမူနာများနှင့်အတူခြေလှမ်းလမ်းညွှန်မှုဖြင့်တစ်ဆင့်။
3 ။ Cover Little က template ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ပါ။
4 ။ အဆင့်မြင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အယ်ဒီတာ - အပိုဒ်နှင့်စာရင်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အထူး CV ရေးသားခြင်းကိရိယာများ။
5 ။ Smart Resume Manager - CV အပိုင်းအမှာစာကိုပြောင်းပါ, CV အပိုင်းခေါင်းစဉ်အမည်များကိုတည်းဖြတ်ပါ, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြုပြင်ပါ။6။ Formatting options များ - စာလုံးအရွယ်အစား, အရောင်များနှင့်အနားသတ်ဆက်တင်များ။
7 ။ Live Resume format preview ။
8 ။ PDF format ဖြင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
9 ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကို Resolder app မှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပုံနှိပ်ပါ။
10 ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေး0န်ဆောင်မှုကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုစင်တာ။
Resolumer builder app ကိုသင်ရွေးချယ်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံစံသို့အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်စာမျက်နှာနှစ်စာကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများ, ယူနိုက်တက်စတိတ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းပုံစံ, Biadata ပုံစံ, CV အစုစုနှင့်အလုပ် application cv format ကို။ Resume Templates Atts Resume Templates သည်လျှောက်ထားသူခြေရာခံခြင်းစနစ်များနှင့်အလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံး။
ယူနိုက်တက်စတိတ်, ဥရောပ, ကနေဒါနှင့်အခြားသောအခြားဒေသများရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိသုတေသနနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအပေါ် အခြေခံ. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အဖွဲ့များအားလုံး။ ဤအချက်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငှားရမ်းသည့်မန်နေဂျာများမျှော်လင့်ထားသည့်အရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငှားရမ်းသည့်မန်နေဂျာများကိုအာရုံစိုက်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Reply Resolder Resolder Resolder Resolder ။
1 ။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ Android မိုဘိုင်းဖုန်းကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသိသူမည်သူမဆို PDF format ဖြင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း vitae ဖန်တီးခြင်းအတွက်ဇီဗောင်အချက်အလက်များ, ပညာရေး, အတွေ့အကြုံ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုဖြည့်ပါ။
2 ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မျိုးစုံအတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း vitae Helperier - ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းတစ်ခုစီအတွက်ဥပမာများနှင့်နမူနာများကိုပြန်လည်စတင်ပါကျောင်းသားများ, လတ်ဆတ်သောဘွဲ့ရ, ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများ, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းအက္ခရာ Templates: ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အဖုံးစာကိုပြန်လည်စတင်ရန်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ရေးရန်အဖုံးစာထည့်ပါ။ Resume Creator App သည်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားအလုပ်သင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းရှင်များ, ဆရာများ, လက်ထောက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ, ဆရာများ, လက်ထောက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်, စသည်ဖြင့်
optional ကိုနှင့်အတူတည်ဆောက်သူကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံကိုထည့်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
5 ။ BiDATA Maker & Portfolio ထုတ်လုပ်သူ - Resume & CV မှလွဲ. ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းတွင် Reserber အက်ပလီကအက်ပလီကအက်ပလီကအက်ပလီကအက်ပလီကေးရှင်းသည်ဇီ0ပင့်များအတွက်ဘစ်ဗီးတာပုံစံများနှင့်အလုပ်အတွက်ဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
6 ။ အော့ဖ်လိုင်းရှိ PDF format ဖြင့် CV ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ, ပုံနှိပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအီးမေးလ်ပို့။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဝေမျှပါ။
7 ။ အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း - စိတ်ဖိစီးမှုအခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Smart နှင့် Quick CV Maker အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် PDF တွင်အရည်အသွေးမြင့် CV ကိုထုတ်လုပ်သည့်အရည်အသွေးမြင့် CV ကို Generate လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုကြည့်ပါ။ "Saved Resume / Downloads" တွင်ဖန်တီးထားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းအားလုံးကိုကြည့်ပါ။
Easy to use.Goo application.
Thinzar Linn Htet
Easy and effective app to use in short time